नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रानाभाटलाई श्रीपेच लगाएर यसवर्षको राजा घोषणा !
रानाभाटलाई श्रीपेच लगाएर यसवर्षको राजा घोषणा !
गोरखा / नेपाली सेनाका खगेन्द्र रानाभाट यस वर्षको लिगलिगे राजा भएका छन् । दौडेर राजा छानिने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै लिगलिगकोट विकास अभियानले वर्षेनी राजा छान्दै आएको छ । डोटी घर भएका रानाभाटलाई श्रीपेच लगाएर यसवर्षको लिगलिगे राजा घोषणा गरिएको हो । खेलकुदमन्त्री राजन केसीले श्रीपेच, रु ५० हजार पुरस्कारसहित रानाभाटलाई आज पुरस्कृत गर्नुभयो । रानाभाटले एक घण्टा दुई मिनेटमा निर्धारित १३.५ किलोमिटर दौड पूरा गर्नुभएको हो । चेपे नदीस्थित चेपेघाटदेखि लिगलिगकोट डाँडासम्म दौड पूरा गर्नुपर्ने नियम छ । यस्तै नेपाली सेनाकै रामजी बस्नेतले एक घण्टा तीन मिनेटमा निर्धारित दूरी पार गरी दोस्रो हुनुभएको हो । बस्नेतलाई रु ३० हजार पुरस्कारसहित मन्त्री केसीले पुरस्कृत गर्नुभयो । यस्तै नेपाली सेनाका अनिश बस्नेतले एक घण्टा ५ मिनेटमा दौड पूरा गरी तेस्रो हुनुभएको छ । बस्नेतले रु. २० हजार नगद पुरस्कार पाउनुभयो । ११७ जना धावकले दौड प्रतियोगितामा भाग लिएको आयोजक संस्थाका उपाध्यक्ष सरोज देवकोटाले
बताउनुभयो । दौडमा स्वदेशी, विदेशी धावक सहभागी हुन पाउछन् ।